Marka Dowladdeennu aysan Musuqmaasuq lahayn! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 3, 2017	0 399 Views
Muqdisho (Himilonews) – Ficillada ragaadiga ah ee dib ula hara umadaha musuqu u yahay qeyb kamid ah nolol maalmeedkooda, waa caadiyan inta aad ku arki karto maamul kasta oo ka dhismay dalka taniyo madax-bannaanida. Heerka laga kala joogo ku dhaqankiisa unbaa kala sarreysa, hayeeshe taariikda musuqmaasuqa waa mid lasoo hana-qaaday bilowgii dowladnimadeenna.
Previous: Laba haween si yaab leh isugu dayay inay ku dhacaan bangi.
Next: Turkiga oo Bangladesh ugu yeeray inay dejiso qaxootiga Rohingya.
Haweeney qalqal gelisay rakaab diyaarad markii loo diiday inay sigaar ku dhex cabto.
Shanta meelood ee ugu xun ee Nairobi looga noolaado
Dadka ka xishooda inay jaceylkooda sheegtaan oo loo helay Shirkad ka caawisa!